Umlando - isayensi ezithakazelisayo ukuthi igcine ulwazi ngokuphila kwesintu, imicimbi edume nobuntu ukuthi abaye baba neqhaza zezenzakalo ezingokomlando Emhlabeni. Ikakhulukazi ulwazi kubalulekile manje, lapho izenzakalo ezibuhlungu zenzeka ngokulandelana lamazwe ezifana elaliyiYugoslavia nase-Ukraine lanamuhla. Kodwa namanje Lesiprofetho Oleg Kiev ngamiswa njengephayona "unina amadolobha Russian"! Namuhla akubona bonke uyazi ukuthi kungani u-Oleg Lesiprofetho ngokuthi. Mhlawumbe wayengumuntu imihlola?
"Tale of esidlule Iminyaka"
Oleg ubuntu uvele zemihla ngemihla mlando, lapho echaza izenzakalo ezihambisana nokushona Novgorod Prince Rurik. Dying, Rurik wamnika zivalelwe indodana akhe gane, Igor. Ngo 879, futhi Novgorod, indodana Igor anakekela Oleg, ngubani-mlando zikholelwa eyisihlobo unkosikazi Rurik sika. Abacwaningi banamuhla bagcizelele ukuthi Oleg kwaba nje iqhawe abanamakhono, owaba umbusi no indoda ethile yeza isikhulu Novgorod. Noma ubani Oleg - waba ibamba isikhathi Igor, iSikhulu Novgorod futhi Kiev, umuntu amandla ngesikhathi kudalwa Russia obumbene. Nestor umlobi wezenzakalo e "Tales ..." yakhe uchaza imisebenzi isikhulu futhi kubonisa ukuthi kungani u-Oleg Veschy.
Mashi ku Kiev
Ukuba ibamba futhi iSikhulu Novgorod, Oleg iminyaka emithathu sele ahlelile bonyana ukwandisa insimu we ubukhulu bamisa amatende e-Smolensk. Emva ukuhlangana ibutho elikhulu, e 882, uya ohlangothini eningizimu futhi ithumba edolobheni. Ukuze Smolensk balandela Ljubech. Kulezi emadolobheni, wabeka ababusi bayo ne amasosha anele futhi baqhubekela Dnieper. Endleleni yakhe ema ngakuye Kiev. Ngalesi sikhathi, ibhodi Kiev ubukhulu eyenziwa Askold futhi Dir. Prince Oleg baba nethuba 'ebona owaleli ezempi kanye nobuqili umuntu ohlakaniphile. Uma ekhatsi Kiev ezintabeni, alibeke ngasesitha isikwati, babonakala kuphela Igor ezingalweni zakhe. Kugcugcutela Askold futhi Dir ukuthi kuyinto ukuvakashelwa ngezilokotho endleleni to the Greeks, ebayalela basuke emzini. Warriors sebeqedile nababusi, Kiev ethumba Prince Oleg.
Kungani - Lesiprofetho? Leli gama kwaba yigama layo lelo kuphela ngemva kwalowo mkhankaso WaseByzantium, ngo-907. Okwamanje, waba iNkosi Kiev wamemezela idolobha "unina amadolobha Russian." Kusukela ngaleso sikhathi u-Oleg waphishekela umgomo ubunye lwamaSlav, nokwandisa imingcele yezwe ekhululiwe inkokhiso okhokhela izizwe labantu abayimizulane.
Uma siphendukela isichazamazwi, singabona ukuthi igama Lesiprofetho kusho hhayi kuphela "inkomba", kodwa "umuntu ocabangelayo". Ngakho-ke ingabe Prince Oleg. Kungenxa umkhankaso wokulwa BoMbuso WaseByzantium e Oleg 907 Lesiprofetho futhi yabonisa nokucija yakhe. Njengoba wakhulelwa, ngosuku lomkhankaso, wabutha impi enkulu, hhayi kuphela amahhashi, kodwa futhi emikhunjini. Wawunodonga zonke izizwe: ". Le ISCYTHIA Elikhulu" amaViking, futhi Tschudi futhi krivichi futhi amazwi, nabanye abaningi, ubani amaGreki ngokuthi Prince Igor wayenalo ilungelo Kiev, u-Oleg, waya amatende. Kwaba ngemva kwalowo mkhankaso kuyacaca ukuthi kungani u-Oleg "Lesiprofetho 'isidlaliso. Isifiso ukwandisa imingcele isiRashiya, yekusungulwa kwebudlelwane izindlela zokuhwebelana namanye amazwe Oleg kwaphoqa umkhankaso wokulwa eByzantium, lapho wangena 907.
Coming eConstantinople (waseConstantinople) kanye namasosha kanye nemikhumbi, babe yizinkulungwane ezimbili namakhulu, Oleg ifike. Lena yayiphathelene, ngoba umuzi, kusukela eLwandle wawuvikelwa amaketanga uvala bay Golden Horn, futhi imikhumbi abakhoni ukunqoba. Befika ogwini, Prince Oleg balwa emhlabeni eConstantinople: ukubulala abantu abaningi umlilo endlini futhi isonto, wenza okuningi okubi. Kodwa muzi abazange sokunikela. Khona-ke u-Oleg yasungulwa Iqhinga: abagqoke izimoto zabo enamasondo. Lapho umoya lishaya fair - yakhishelwa oseyili futhi imikhumbi waya maqondana iConstantinople. AmaGreki baye baqonda ukuthi kwase kuyisikhathi sokuba ukuthumela amanxusa kanye ukuxoxisana intela. Oleg wathembisa anika konke afuna. Yambekela okuhlukahlukene newayini Prince bengalamukeli, funa konke lokhu anobuthi - futhi Akukho phutha esilenzile. Leli qiniso libonisa ukuthi kungani u-Oleg "Lesiprofetho 'isiteketiso: ngokuhlakanipha kwasindisa ukuphila kwakhe.
Sword emasangweni waseConstantinople
Wakha Oleg Lesiprofetho inkokhiso amaGreki. Iyalelwe ukuba ikhokhe 12 hryvnia ukuba yilowo nalowo muntu emkhunjini; kwakukhona abantu amane. A imikhumbi - izinkulungwane ezimbili. Wayala inkokhiso futhi amadolobha eKiev, Chernigov, Liubech, Rostov, Polotsk, Pereyaslavl futhi namanje kwezinye izindawo, phezu iye yakhipha Oleg. AmaGreki ababevumelana ngawo wonke izimo ukuze kulondolozwe ukuthula elizweni lakibo. Yokudala ukuthula, banika nomunye kuthathwa isifungo: amakhosi ngesiGreki ukuqabulana esiphambanweni futhi wathembisa ukuba ikhokhe intela. A Prince Oleg namadoda akhe wafunga izikhali nonkulunkulu bazo: rusichi babe namaqaba. Bethembisa ukuthi ayengeke alwe, begodu ngenza ukuthula. Njengoba uphawu anqobe amaGreki Oleg hung ihawu lakhe phezu amasango omuzi, futhi kuphela wabuyela. Oleg wabuyela Kiev inempahla enkulu, bambiza ngemva kwalokho - "Lesiprofetho '. Njengoba isivumelwano sokuthula phakathi kwalawa mazwe amabili kwase kuqala ngemvume - Russia nase eByzantium, waqala ukuthandana: kufanele ziyekwe baphathe ukuhweba duty-free. Kodwa uma ngenza iphutha elibi kakhulu, futhi u-Oleg Veschy: izenzakalo sokufa kwakhe bathi ngakho.
Lesi sibikezelo we izazi
Oleg Veschy waphendukela izazi yombuzo ngokufa kwakhe kungani Uyofa? Labo ukubikezela kokufa ihhashi yakhe ethandekayo. Bese I yayala Oleg Lesiprofetho ukubeka okuphakelayo ihhashi, kodwa awusoze ziholele kubo. * Ngafunga ungalokothi ukuba ahlale kuyo. Lokhu kwaqhubeka iminyaka eminingi. Oleg waya empini, isikhulu Kiev, engena ezindlini ngezindlu emhlabeni nge emazweni amaningi. Kusukela ngaleso sikhathi, kwathatha ehlobo amane, weza yesihlanu, eminyakeni 912. Prince ebuya endaweni kokuseshwa waseConstantinople, futhi zikhumbuleke ihhashi lakhe ozithandayo. Wabiza umyeni, yena benze ukuhlonywa imibuzo ngempilo yakhe. Wathola impendulo: ihhashi wafa. Futhi - iminyaka emithathu. Oleg baphetha ngokuthi izazi akakhohliswanga izibikezelo zabo: Ihhashi usefile, futhi isikhulu - uyaphila! Kungani u-Oleg Veschy akazange abakholelwe futhi wanquma ukubona izinsalela ihhashi? Kuyinto, akekho owaziyo. Ngangifuna angakhele ukubona amathambo akhe, waya endaweni lapho amanga. Ukubona skull amahhashi, wangena kuso ngala mazwi: "Kule skull ukufa uma Ngithatha?"
kwakukhona inyoka futhi kwabacasula Veschego Olega evela Yekhanda. Ngemva kwalokho ngagula futhi washona ngemva nje. Ugcwalisa lesi siprofetho ngendlela afe Prince Oleg Veschy, ogama biography kuchazwa zemihla ngemihla Nestor, lapho unikezwa legend.
Grand Prince of Kiev ne Novgorod, Oleg the Hlakaniphile lalaziwa 879 futhi wafa ngo 912. Iminyaka wokubusa kwakhe yaqashelwa: kwakukhona ubunye sezizwe zakwa Slavic kule nkathi, isikhungo esisodwa wahlelwa - Kiev. Kakhulu wandisa imingcele Russia, ukusungula kobungane nobudlelwane nge waseByzantium. Kungani u-Oleg "Lesiprofetho 'isidlaliso? Ukuze ukuhlakanipha kwakhe, umbono, ngokuba ikhono lokukhetha isu kwesokudla futhi ngokuphumelelayo ukuqhuba inqubomgomo angaphandle.
Imvelaphi yokuphila Cro-magnon
Kazan Khanate: ngokujoyina eRussia Ngokombono ongokomlando
Nina Petrovna Hruscheva - ngomfazi uNobhala lokuqala CPSU
Impi Kosovo: Eminyakeni, izizathu, imiphumela
Berezovka - ski resort Odessa esifundeni
Swimsuits - yemfashini lolwandle inkathi ngo-2013!
Indlela ukufaka "Android Market '? Buyekeza "-Android Market"